၄၉ နှစ်လို့ ပြောရင် ဘယ်သူမှ မယုံကြတဲ့ ဂျပန်က အန်တီကြီး | Buzzy
၄၉ နှစ်လို့ ပြောရင် ဘယ်သူမှ မယုံကြတဲ့ ဂျပန်က အန်တီကြီး
ဂျပန်နိုင်ငံက Youthful Pagean အလှမယ်ဆု ရရှိထားတဲ့ Masako Mizutani ဆိုတဲ့ အသက် ၄၅ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးကြီးဟာ ဆုနဲ့ ထိုက်တန်လွန်းသူလို့ ဆိုရမှာပါပဲ။ သူမရဲ. မျက်နှာနဲ့ ဟန်ပန်အနေအထားဟာ ဆယ်ကျော်သက်လေးလို့ ထင်ရပြီး သူမကို ဂျပန်နိုင်ငံက လူတွေက ထာဝရနုပျိုသူလို့ ခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်
ဂပြနျနိုငျငံက Youthful Pagean အလှမယျဆု ရရှိထားတဲ့ Masako Mizutani ဆိုတဲ့ အသကျ ၄၅ နှဈအရှယျ အမြိုးသမီးကွီးဟာ ဆုနဲ့ ထိုကျတနျလှနျးသူလို့ ဆိုရမှာပါပဲ။ သူမရဲ. မကျြနှာနဲ့ ဟနျပနျအနအေထားဟာ ဆယျကြျောသကျလေးလို့ ထငျရပွီး သူမကို ဂပြနျနိုငျငံက လူတှကေ ထာဝရနုပြိုသူလို့ ချေါဝျေါကွပါတယျ
သူမဟာ ၁၉၆၈ ခုနှစ်က မွေးဖွားတာဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ. ဓါတ်ပုံတွေကို လူမှုကွန်ယက်တွေပေါ် တင်ရာကနေတစ်ဆင့် တဖြည်းဖြည်း လူသိများလာတပြီး မော်ဒယ်လုပ်ဖို့ ကမ်းလှမ်းတဲ့ အေဂျင်စီတွေတောင် ရှိလာပါတယ်။
သူမဟာ ၁၉၆၈ ခုနှဈက မှေးဖှားတာဖွဈပါတယျ။ သူမရဲ. ဓါတျပုံတှကေို လူမှုကှနျယကျတှပေျေါ တငျရာကနတေဈဆငျ့ တဖွညျးဖွညျး လူသိမြားလာတပွီး မျောဒယျလုပျဖို့ ကမျးလှမျးတဲ့ အဂေငျြစီတှတေောငျ ရှိလာပါတယျ။
သူမမှာ သမီးတစ်ယောာက်လည်း ရှိပြီး အမေနဲ့ သမီး တွဲပြီး လျှောက်သွားရင် ဘယ်သူကအမေ ဘယ်သူက သမီးမှန်းမသိရအောင် နုပျိုသူပါ။
သူမမှာ သမီးတဈယောာကျလညျး ရှိပွီး အမနေဲ့ သမီး တှဲပွီး လြှောကျသှားရငျ ဘယျသူကအမေ ဘယျသူက သမီးမှနျးမသိရအောငျ နုပြိုသူပါ။